“Tokony Hiresaka ny Tolon’ny Tompotany Isika, Kanefa Mila Mankasitraka Ny Zava-bitantsika Ihany Koa “ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2017 4:48 GMT
Manasa ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manan-danja amin'ny fanangonam-baovao momba azy ireo sy ny olana izay miantraika amin'izy ireo ny Reframed Stories (tantara narafitra indray). Mifantoka amin'ny fisaintsainan'ireo olona izay matetika tsy miseho fa soloin'ny hafa tena amin'ny fampahalalam-baovao ny tantara.
Andrés Tapia no tompon'andraikitry ny serasera ao amin'ny Konfederasionan'ny Tompotany any Amazonia Ekoadaoriana (CONFENIAE) .
Zavatra roa loha no tonga tao an-tsaiko raha vao nijery ity fandalinan'ny fanehoana ny fampahalalam-baovao ity aho. Etsy ankilany, hitako ny ampahany mampalahelo teo amin'ny tantara, ny olana, ny fifandonana, ny tolona izay nataon'ireo vondrom-piarahamonina tompotany nandritra ny taona maro. Amin'ny lafiny iray, hitako ihany koa ny zava-bitantsika.
Hevi-dehibe avy amin'ny lahatsoratra miisa 240 izay navoaka teo anelanelan'ny volana Aprily 2013 sy Jona 2017 hita tao anatin'ny fandraketana Media Cloud miisa efatra tao amin'ny sehatra fampahalalam-baovao amin'ny teny Espaniôla any Ekoadaoro. (Jereo ny fangatahana ôrizinaly; Jereo ny sary lehibe kokoa)
Nisy ny fanasongadinana ny fanangonam-baovao tamin'ny taona 2014, izay fotoana nangatahan'ny Fanjakana Ekoadaoriana famelana avy amin'ny vahoaka Sarayaku taorian'ny nandreseny tamin'ny raharaha tao amin'ny Fitsarana Iraisana Amerikanina tamin'ny taona 2012 , taorian'ny taona maro niadiana ny olan'ny tany. Heveriko fa zava-dehibe ny mankatoa fa, mazava ho azy, nisy ny fifandonana, ny ady, ny fanoherana, saingy nisy ihany koa ny zava-bita. Tao amin'ny raharaha Sarayaku, tena zava-dehibe tokoa ny zava-bitany izay tsy ho an'i Sarayaku ihany fa ho an'ny faritra Amazona sy ny firenena iray manontolo ihany koa.
Ny fandraketana Media Cloud momba an'i “sarayaku” miaraka amin'ny tendro nandritra ny fanangonam-baovao nanomboka tamin'ny taona 2014.
Hitako ihany koa fa nisy teny manan-danja maro tsy hita tao amin'ity sary ity. Ohatra, tsy hitako ny teny manaporofo fa maro tamin'ireo olana atrehin'ny vondrom-piarahamonina tompotany tao Ekoadaoro no mifototra amin'ny olana mifandraika amin'ny fitrandrahana tafahoatra, ary tsy hitako ny teny toy ny hoe “militarización” (fanangona-miaramila) izay miresaka ireo olana atrehin'ny vondrom-piarahamonina indizeny. Angamba lohahevitra sasantsasany ihany no resahin'ny fampitam-baovao ary manome ny fomba fijery amin'ny ankapobeny ny zava-mitranga izy, saingy tsy hita ny fototry ny olana, sy ny fomba fijerin'ny vondrom-piarahamonina indizeny sy ny firenena .
Ny fiomanana tao Sarayaku tamin'ny taona 2014 tamin'ny fialantsiny nataon'ny fanjakana momba ny tetikasam-pitrandrahana tao amin'ny faritaniny. Sary avy amin'ny ekipan'ny serasera ao Sarayaku ary nahazoana alàlana. Sary: Sarayaku.org
Ity dia ampahany amin'ny andian-tantara Rising Frames izay novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa akaiky tamin'ny vondrom-piarahamonina indizeny ao Sarayaku sy ny teratany Shuar, izay samy any amin'ny faritr'i Amazonia ao Ekoadaoro avokoa. Ny vahoaka Sarayaku sy Shuar dia niady teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy nasionaly mba hampitsaharana ny tetikasam-pitrandrahana ao amin'ny faritaniny, ary ny ampahany lehibe tamin'ny tolona nataony ny mandefa hafatra amin'ny vahoaka [mg]. Nangataka tamin'ireo mpikambana izahay mba hamaly ny fandalinan'ny fampitam-baovao izay nangataka ny fomba anehoana ny lohahevitra mifandraika amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ao amin'ny vaovao.
Nohamarinin'i Belen Febres-Cordero ny fitsipi-pitenenana sy fanoratan'ity lahatsoratra ity .